ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အဆိုတော် ခင်မောင်တိုးအတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲခြင်း
အဆိုတော် ခင်မောင်တိုးအတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲခြင်း
“တန်ဖိုးထား၊ လေးစားရပါသော အဆိုတော် ခင်မောင်တိုး
ကျန်ရစ်သူ မိသားစုနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်။”
Sad so much for losing an invaluable person.
I would like to express my heartfelt condolences on the demise of the best Myanmar pop singer (U) Khin Maung Toe. It is indeed the irreplaceable loss ofagreat artiste of Myanmar.
La Pyat said...
Nay Lin Aung said...
ranong thar said...
ကျွန်တော် ရင်ထဲမှာအမြဲ ရှိနေမှာပါ.
"မိုးမခပင်တွေ ငိုနေကြပြီ ကိုတိုးကြီး"
ကိုယ့်အသွေးအသားတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးရသလို.. ခံစားရတယ်...။
ကျော်စတူဒီယိုမှာ အသံသွင်းစဉ်တုန်းက နေ့ရက်တွေကို အမှတ်ရနေမိတယ်။
ဂီတချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာသမားစစ်စစ်ကြီးတစ်ယောက် ထွက်ခွါသွားနှင့်ပြန်ပါပြီ..။ နှမြောတသမိတယ်။
Gee Ohn said...
ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲမှာ မိုးမခပင်တွေ ငိုနေပါပြီ
Htay Win said...
ပန်းခရမ်းပြာတပွင့် ကြွေခဲ့ပြီ ပဲ့့ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ